ဒီဗွီဘီ ရုပ်မြင်သံကြားပရိသတ်တို့ စွဲစွဲမြဲမြဲ စောင့်ကြည့်ခဲ့ရသော “ကျနော်ဆွဲဖွင့်မိသော တံခါးများ” အစီအစဉ်ကို ဖန်တီးတင်ဆက်ခဲ့သည့် နေဇော်နိုင်၏ အစီအစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ အလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်နေသည့် မြန်မာစာအရေးအသား အသုံးအနှုန်းမှသည် အမှားမှားအယွင်းယွင်းဖြစ်နေသည့် အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေးအထိ၊ နေ့စဉ်ဘ၀အတွင်း ခံစားတွေ့ကြုံ ဖြစ်ရပ်အဖုံဖုံနှင့် လူမှုဘ၀ပြဿနာပေါင်းစုံကို ပိုင်နိုင်သော အပြော၊ ထိမိသော သရော်ချက်၊ လေးနက်သော သုံးသပ်ဝေဖန်မှုတို့ဖြင့် သရုပ်ဖော်တင်ပြထားသည့် နေဇော်နိုင်နှင့် ဟာသလူရွှင်တော် အရိုင်းတို့၏ နှစ်တော် ဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်။
ပြောပြရင် ဒေါပွမှာလား (၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၀)
838 March 5, 2015
ပြောပြရင် ဒေါပွမှာလား (နေဇော်နိုင်)
ပြောပြရင် ဒေါပွမှာလား (၁၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၄)
209 March 5, 2015
ပြောပြရင် ဒေါပွမှာလား ၁၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၄ အရိုင်းနှင့် နေဇော်နိုင် တင်ဆက်သည် DVB TV – 15.10.2014
ပြောပြရင် ဒေါပွမလား (၂၂ ရက် အောက်တိုဘာ ၂၀၁၄)
263 March 5, 2015
ပြောပြရင် ဒေါပွမလား တင်ဆက် – နေဇော်နိုင်၊ အရိုင်း
ပြောပြရင် ဒေါပွမှာလား (၂၉ ရက် အောက်တိုဘာ ၂၀၁၄)
391 March 5, 2015
ပြောပြရင် ဒေါပွမှာလား တင်ဆက် – နေဇော်နိုင်၊ အရိုင်း
ပြောပြရင် ဒေါပွမှာလား (၁ ဇူလိုင် ၂၀၁၄)
289 March 5, 2015
ပြောပြရင် ဒေါပွမှာလား အရိုင်း နှင့် နေဇော်နိုင် တင်ဆက်သည်
ပြောပြရင် ဒေါပွမှာလား (၁၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၄)
347 March 5, 2015
“ပြောပြရင် ဒေါပွမှာလား” အရိုင်းနှင့် နေဇော်နိုင် တင်ဆက်သည်
ပြောပြရင်ဒေါပွမှာလား (၈ ဇူလိုင် ၂၀၁၄)
386 March 5, 2015
“ပြောပြရင် ဒေါပွမှာလား အရိုင်းနှင့် နေဇော်နိုင် တင်ဆက်သည်။
ပြောပြရင် ဒေါပွမှာလား (၁၅ ဇူလိုင် ၂၀၁၄)
345 March 5, 2015
ပြောပြရင် ဒေါပွမှာလား အရိုင်းနှင့် နေဇော်နိုင် တင်ဆက်သည်။
ပြောပြရင် ဒေါပွမှာလား (၉ ရက် ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၄)
335 March 5, 2015
DVB TV -ပြောပြရင် ဒေါပွမှာလား တင်ဆက် – နေဇော်နိုင်၊ အရိုင်း
ဗိုလ်ချုပ်မြင်းစီးကြေးရုပ်ထားရှိမည့်အစီအစဉ် ကရင်နီ ပြည်သူလူထုကန့်ကွက်
ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ ကန္တာဟေဝန် ပန်းခြံမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မြင်းစီးကြေးရုပ်ထားရှိမှာကို ကန့်ကွက်ကြောင်းနဲ့ တည်ဆောက်နေတာကို ရပ်တန့်ပေးဖို့[...] The post ဗိုလ်ချုပ်မြင်းစီးကြေးရုပ်ထားရှိမည့်အစီအစဉ် ကရင်နီ ပြည်သူလူထုကန့်ကွက် appeared first on DVB.
မြေသိမ်းဥပဒေကြမ်းတွင် ကာလတန်ဖိုး နစ်နာကြေးပေးရန် ပြင်ဆင်ထား
၂၀၁၇ ခုနှစ် မြေသိမ်းဥပဒေကြမ်းမှာ နစ်နာသူတွေအတွက် ကာလတန်ဖိုး၊ နစ်နာကြေး၊ ရွှေ့ပြောင်းစရိတ်တို့ပေးဖို့ ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ အမျိုးသားလွှတ်တော်[...] The post မြေသိမ်းဥပဒေကြမ်းတွင် ကာလတန်ဖိုး နစ်နာကြေးပေးရန် ပြင်ဆင်ထား appeared first on DVB.
ဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရမှုနှင့် ဆက်နွှယ်ပြီး အောင်ဝင်းဇော်ကို စွဲထားသည့် လက်နက်မှု ပယ်ဖျက်
တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေဦးကိုနီကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခဲ့မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရားရုံးက ဇေယျာဖြိုးကို စွဲချက်တင်ထားတဲ့ ပုဒ်မကို ပြင်ဆင်ဖို့[...] The post ဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရမှုနှင့် ဆက်နွှယ်ပြီး အောင်ဝင်းဇော်ကို စွဲထားသည့် လက်နက်မှု ပယ်ဖျက် appeared first on DVB.
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ မသန်းစွမ်သူဦးရေ ၁ သိန်း ၆ သောင်းခွဲကျော်ရှိနေပေမယ့် အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းရရှိဖို့ ခက်ခဲနေတယ်လို့[...] The post ရခိုင်တွင် မသန်စွမ်းသူများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိရေး ခက်ခဲနေ appeared first on DVB.
မြစ်တရာကြိုးဝိုင်းထဲ ဆင်မုဆိုးများဖွက်ထားသည့် တူးမီးသေနတ်များ သိမ်းဆည်းမိ
ဧရာဝတီတိုင်း၊ ငပုတောမြို့နယ်၊ မြစ်တရာကြိုးဝိုင်းထဲမှာ ဆင်ပစ်မုဆိုးတွေ ဝှက်ထားတဲ့ တူးမီးသေနတ်တွေကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ ဧရာဝတီဆင်ချစ်သူများအဖွဲ့ကနေ သိရပါတယ်။ မေလ[...] The post မြစ်တရာကြိုးဝိုင်းထဲ ဆင်မုဆိုးများဖွက်ထားသည့် တူးမီးသေနတ်များ သိမ်းဆည်းမိ appeared first on DVB.